Etu esi enyocha nzacha ozi ịpụ na nchịkọta Google
Ntuziaka SPAM List: Esi Wepụ Ntugharị Ntugharị na Nkwupụta Akụkọ Google
Tọzdee, Disemba 1, 2020 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
You nyocharala akụkọ Google Analytics gị naanị iji chọta ụfọdụ ndị ọbịa na-atụghị anya ị na-apụta na akụkọ ahụ? Na-aga na saịtị ha ma ọ nweghị aha gị mana enwere onyinye ndị ọzọ n’ebe ahụ. Maa amụma? Ndị ahụ anaghị ezo aka na saịtị gị.
Ọ bụrụ na ị maghị etu Google Analytics na-arụ ọrụ, ihu ọma a pikselụ agbakwunyere na ibe ọ bụla ibu nke na-ejide ụda data ma ziga ya na engine nke Google Analytics. Nchịkọta Google na-ebelata data ahụ ma hazie ya nke ọma na akụkọ ị na-ele. Ọ dịghị anwansi n'ebe ahụ!
Mana ụfọdụ ụlọ ọrụ adịgboroja nzuzu emebiela ụzọ pixel Google Analytics ma mebie ụzọ ahụ wee kụọ ihe atụ Google Analytics gị. Ha na-enweta koodu UA site na edemede nke ị gbanye na ibe ahụ wee, site na ihe nkesa ha, ha kụrụ sava GA ugboro ugboro ruo mgbe ha malitere ịpụta na akụkọ ntinye aka gị.
Ọ bụ ihe ọjọọ n'ezie n'ihi na ọ dịghị mgbe ha butere nleta na saịtị gị! N'aka ozo, odighi uzo gi gha egbochi ha. Agagharị na nke a na onye ọbịa anyị ji ndidi kọwaa ihe ha na-eme ugboro ugboro ruo mgbe ọ gafere site na okpokoro isi m. A na-akpọ ya a ghost ntughari or onye na-ekwu banyere mmuo ebe ọ bụ na ọ dịghị mgbe ha metụrụ saịtị gị aka n'oge ọ bụla.
Na eziokwu niile, amabeghị m ihe kpatara na Google amalitebeghị ịdebe nchekwa data nke ndị na-ekwu okwu spam. Lee ihe magburu onwe ya nke ahụ ga-abụ maka ikpo okwu ha. Ebe ọ bụ na ọbịbịa ọ bụla adịghị eme, ndị spammers a na-ebibi akụkọ gị. Maka otu n'ime ndị ahịa anyị na-ezo aka spam na-eme ihe karịrị 13% nke nleta saịtị ha niile!
Mepụta ngalaba na nchịkọta Google nke na-egbochi ndị na-ezo aka Spammers
Banye na akaụntụ Google Analytics gị.
Mepee Echiche nke gunyere akụkọ ịchọrọ iji.
Pịa Akuko tab, wee mepee akụkọ ịchọrọ.
N'elu akụkọ gị, pịa + Tinye Nkebi
Aha nke All Okporo ụzọ (Ọ dịghị Spam)
Na ọnọdụ gị, jide n'aka na ị ga-ekwu wepu na isi iyi ọkụ regex.
Enwere ndepụta ndị na - akpọ spammers na Github emelitere nke ndị ọrụ Piwik na - eji ma ọ mara ezigbo mma. M na-adọta ndepụta ahụ na-akpaghị aka n'okpuru ma na-edozi ya nke ọma site na nkwupụta OR mgbe ngalaba ọ bụla (ị nwere ike idetuo na mado ya na mpaghara ederede dị n'okpuru n'ime Google Analytics):
Zọpụta akụkụ ahụ ma ọ dị maka ihe ọ bụla dị na akaụntụ gị.
You'll ga-ahụ ọtụtụ ederede ihe nkesa na plugins na ebe ahụ iji gbalịa igbochi ndị na-ekwu okwu spam na saịtị gị. Echegbula iji ha… cheta na ndị a abụghị ezigbo nleta na saịtị gị. Ihe edere ederede ndị a na-eji ghasiri GA pikselụ ozugbo site na ihe nkesa ha ma ọ bịaghịkwa na nke gị!
Tags: Analyticsigbochi spam onye na-ezo akaGoogle Analyticsspam onye na-ezo akandenye aha spam
Freshcaller: Virtual ekwentị sistemụ maka ndị ahịa dịpụrụ adịpụ
Aprịkọl Anụ: Otu Ndị Na-akwụ Ingwọ Otu Ndị Na-akwụ ụgwọ
Jul 3, 2014 na 8: 33 AM
Daalụ maka ndụmọdụ ndị a. Ọ na-ewute m ịnweta ya na stats m.
Dec 1, 2015 na 5:27 PM
Bet nzọ. Anyị emelitere ihe ziri ezi na nke a ebe ọ bụ na ndị na-ekwu okwu spam anaghị abịa na saịtị gị.
Ozi Mgbasa Ozi Spam (@RefSpamHelp)
Mee 6, 2015 na 1: 03 PM
Anyị nwekwara ụfọdụ iwe na spam na-ezo aka. Anyị gbalịrị ụfọdụ “ngwọta” achọtara na weebụ - btw htaccess-manipulaton anaghị egbochi ndị na-ezo aka na mmụọ -, lara oge n'iyi na -emepụta ihe nzacha na GA ma wuo ezigbo ihe ngwọta anyị: http://www.referrer-spam.help ...
Anyị nwere olile anya na ọ ga-amasị gị.
Dec 1, 2015 na 5:28 PM
O yikwara ka ndị na-ezo aka na mmụọ aghọwo onye ọkpụkpọ kachasị. Anyị emelitela ndụmọdụ na saịtị ahụ. Daalụ maka enyemaka niile ị na-enye!
Mee 21, 2015 na 5: 23 PM
Daalụ maka enyemaka gị niile na nke a!
Dec 1, 2015 na 5:29 PM
Bet nzọ. Anyị emelitere ndụmọdụ ahụ nke ọma dabere na usoro ntinye aka mmụọ ọhụrụ ndị a na-eji.
Jun 11, 2015 na 3: 16 PM
Nnukwu enyemaka ebe a, daalụ! Ugbu a iji ndidi chere maka mgbanwe nke ibiaghachi ọnụego 😀
Dec 1, 2015 na 5:50 PM
Emelitere m ndụmọdụ ahụ iji nye otu maka Google Analytics. Wayzọ ahụ ị ga - ahụ mmetụta ozugbo.
Aug 5, 2015 na 4:21 PM
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na spam na-akpata nsogbu: Ndị spammers na-atụgharị ya wee nyezie ọgwụgwọ - nke ahụ bụ uche m.
You enyochala ihe mgbochi IP ma ọ bụ ihe ọ bụla iji hụ ma enwere nso ịchọta ha?
Echiche ndị ọzọ Ana m agbalị ịhụ ma ndị ọzọ anwaala:
1) M ga - asị na ịtọgharịa kuki iji nwee ogologo oge iji gụọ oge dị ka nleta mana ndị bọọ ga - agbanye saịtị ahụ. Ihe ndị a kwesiri ka emeso ha dị ka mwakpo DDoS n'ihi ụzọ ha si ewepụ ihe onwunwe
2) Mee profaịlụ ọhụrụ ma tinye koodu ọhụụ na Google Tag Manager ka koodu ahụ ghara ịdị mfe mkpụ. Ọzọkwa, ịme akaụntụ ọhụrụ na ịme ka profaịlụ 4 ka ọnụọgụ ikpeazụ ejedebe na -1 bụ ntụle ọzọ. Mana, ana m eche na ugbu a, ndị spammers na - emepụta nọmba UA ma ọ bụ na - eleghara nọmba UA anya ma jiri ngwungwu url builler
Aug 13, 2015 na 6: 06 AM
Ndewo, ezigbo ntuziaka, emeela m ngwa ọrụ n'efu nke na-enweta nchịkọta ma na-ewuli faịlụ htaccess maka saịtị gị, n'efu http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ nye ya ịga
Aug 14, 2015 na 10:20 PM
Colin, nke a bụ ngwá ọrụ dị egwu! Aga m etinye ya na post!
Tobe Nwachukwu (@nkechukwunyere)
Dec 8, 2015 na 4:50 PM
Nnukwu ihe, Douglas.
Dec 8, 2015 na 5:50 PM
Daalụ Don! Olile anya ihe niile di nma.
Dee 22, 2015 na 10: 27 AM
N'ezie bara uru…. nke a ụdị spam okporo ụzọ bụ ihe mbụ na-akpata mkpesa na-akọ na nchịkọta, nke na-enyeghị aka igosi ndị ahịa otu saịtị ahụ si eme.
Jenụwarị 1, 2016 na 12:55 PM
daalụ na ebe nrụọrụ weebụ m jupụtara na spam na adsense machibidoro m
Jenụwarị 3, 2016 na 6:10 PM
Spam na-aghọ nnukwu okwu n'oge a. Agbanyeghị, post a abụghị maka saịtị gị ma ọ bụ ndị mmadụ na - achọta saịtị gị. Ha na emechi Google Analytics. Okwesighi imetu Adsense gi ma, ma gha ghapu Google Analytics gi.
Drabuziai hụrụ n'anya
Jan 19, 2016 na 8: 30 AM
Afọ juru m na spam a. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere m aka.
Jan 19, 2016 na 11: 32 AM
Abụkwa m. Enweghị m ike ikwenye na Google esiteghi na ngwọta maka nke a.
Jan 19, 2016 na 10: 33 AM
Nnukwu ihe, nwere nsogbu na nke a n'oge gara aga na ọtụtụ ndị yiri ka ha enweghị echiche na ọ na-aga n'ihu!
Jan 19, 2016 na 11: 31 AM
Ekele m na-ekweta… Amaghị m ihe na-eme ogologo oge, ma!
Jan 24, 2016 na 9: 14 AM
Daalụ maka isiokwu gị Douglas. Nnukwu ọgụgụ. Akpọrọ m spam asị kpamkpam, ọ kpatara ọtụtụ nsogbu maka weebụsaịtị m n'oge gara aga, oge ụfọdụ, ọ na - eme ka saịtị WordPress m daa mgbe m nwere ụdị akwụkwọ edemede ochie.
O doro anya na m ga-ekekọrịta edemede a na saịtị m.
M ugbu a na-amalite a wordpress blog maka marketers.
Mee 1, 2016 na 11: 28 AM
Ndewo Douglas .. enwere m otu ajụjụ. Enwetara m nleta ole na ole site na com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Nke ahụ ọ gụnyere spam? daalụ maka azịza gị
Mee 3, 2016 na 10: 26 AM
Ndewo Fauzy, ekwenyere m na nke ahụ bụ onye ziri ezi sitere na Google gam akporo mobile ngwa.
Aug 11, 2016 na 10: 46 AM
Gini mere ochicho ojoo na-eme, gini ka ndi spammers a si na ya?
Aug 11, 2016 na 10: 49 AM
Ọ bụ eziokwu na-akụda mmụọ. Nanị uru ọ ga-abara bụ na ndị ọrụ nyocha pere mpe ga-achọ onye na-ezo aka ma zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ọ bụ ụzọ dị oke ọnụ ala ma dịkwa mkpari iji gbalịa iduhie ndị nwe saịtị pere mpe.